Jurgen Klopp Oo Sharaxay Sababta Rasmiga Aheyd Ee Uu Keyd U Geliyay Sadio Mane Kulankii Shalay Ee Aston Villa - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJurgen Klopp Oo Sharaxay Sababta Rasmiga Aheyd Ee Uu Keyd U Geliyay Sadio Mane Kulankii Shalay Ee Aston Villa
Jurgen Klopp Oo Sharaxay Sababta Rasmiga Aheyd Ee Uu Keyd U Geliyay Sadio Mane Kulankii Shalay Ee Aston Villa
April 11, 2021 admin Wararka Ciyaaraha Maanta 3
Jurgen Klopp ayaa sheegay in kulanka Arbacada ee Champions League ee lugta labaad ee wareega 8da ee ay la ciyaarayaan Real Madrid inuusan wax saameyn ah ku laheyn go’aankii uu kursiga keydka ku dhigay Sadio Mane kulankii shalay ay ka badiyeen kooxda Aston Villa.
Xiddiga reer Senegal ayaa doormuhiim ah ka qaatay guulihii kooxda ee labadii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay laakiin waxa uu ku guuldareystay inuu qaab ciyaareed sidaas la mid ah soo bandhigo xilli ciyaareedkan.
Xaqiiqdiina 28 jirkaan wuxuu dhaliyay kaliya hal gool sideedii kulan ee ugu danbeysay tartamada oo dhan,, taasoo keentay in Klopp uu ka doorbido xiddiga qaab ciyaareedka fiican ku jira ee Diogo Jota.
Jota ayaa wacdarro u dhigayay Liverpool tan iyo markii uu ka soo wareegay Wolves laakiin wuxuu seddex bilood ku maqnaa dhaawac jilibka ah.
Xiddiga reer Portugal ayaa dhaliyay labo gool isagoo kursiga keydka ka soo kacay kulankii ay isbuucii hore 3-0 kaga badiyeen Arsenal, waxaana lagu abaalmariyay in lagu soo bilaabo shaxda Reds.
Reds ayaa isku dayi doonta inay dhanka kale u rogaan guuldaradii 3-1 ee ku soo gaartay Madrid marka ay Real ku soo dhaweeyaan Anfield habeenka Arbacada, laakiin Klopp ayaa carabka ku adkeeyay in keydkii uu geliyay Mane inaysan wax shaqo ku laheyn inuu weeraryahanka u nasasiinayay kulankaas muhiimka ah.
Markii la weydiiyay haddii ciyaarta Real Madrid ay qeyb ka aheyd go’aankii uu keyd ku dhigay Mane, Klopp ayaa ku jawaabay: “Maya, maya kaliya waa isku aad, adiga ayaana haatan ii sheegaya.
“Adiga kama wado laakiin warbaahinta ayaa sheegeysa, Mane goolal ma uusan dhalinin kulamo badan.
“Waa xaalad ay qasab tahay inaad eegto qofka qaab ciyaareedka fiican soo bandhigaya iyo waxyaabo kale, sida ay ciyaartoyda u wada shaqeyn karaan? Halkee ayuu Bobby iyo Mo dabcan iyo Diogo ka ciyaari karaan, maxay sameyn karaan?
“Sidee ayaan u safi karnaa khadkeena dhexe, maxay tahay heerka raacasho ee aan sameyn karno? waxyaabahaas oo dhan ayaan ka fekeraa marka aan soo xulanayo shaxda.
“Qasab iguma aheyn inaan keyd geliyo Mane laakiin maanta waan sameeyay.”
Line up ogu fican ay liverpool ku wejihi karto arbacada aniga aragtideyda waa sidaan.
Salah, jota, famino
Dhaxda weliba sida ay u istagayaan waa saan.
Shaqiri waa inu daba istaagaa afka hore.
Thiago iyo fabino waa in ay kasii danbeeyaan shaqiri.
Repison, kabak,phelip, milner
Line up ogu fican ay liverpool ku wejihi karto arbacada madrid aniga aragtideyda waa sidaan.
Golka wadag ma ahan.